Fantaro ireo olona te-hanaisotra ireo lalàna manimba ny fahalalahana ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2015 5:39 GMT
Misy kinasa rosiana vaovao eo am-pamariparitana ireo lalàna rosiana manitsakitsaka ny fototry ny zon'olombelona ka tokony hofoanana. Sary avy amin'i Imagined Reality ao amin'ny Flickr. CC BY-NC-SA 2.0.
Nanaraka ny tatitry ny lalàna nolaniana avy amin'ny Akon'ny RuNet Echo nandritra ny taona nandalovana ianao ka mahamarika ny hamaroan'ny lalàna rosiana, izay mikendry ny hamerana ny zo sy ny fahafahan'ny olompirenena amin'ny ankapobeny. Ny lalàna momba ny eksitiremisma, ny fitsipika miady amin'ny fihetsiketseha-panoherana tsy nahazo alalana, ny lalàna momba ny blaogera—ary mbola mitohy ny lisitra. Ao ambany fialokalofan'ny fiarovam-pirenena na fitiavan-tanindrazana, dia mandany karazan-dalàna mampitombo ny fanivanana, mametra ny fahefan'ny fifanarahan'ny zon'olombelona iraisampirenena ary mametra ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahana maneho hevitra na antserasera na andavanandro ny mpanao lalàna sy ny manampahefanan'ny governemanta rosiana.
Saingy ankehitriny misy vondrona avo ara-pianarana sy manampahaizana rosiana iray nanangana vaomieram-bahoaka manao ho asa fototra ny famakafakana ny lalàna rosiana hamaritana hoe inona amin'ireo lalàna misy no mametra ny zo sy ny fahalalahan'ny Rosiana, ary manoro hoe inona ny lalàna tokony esorina rehefa mihamalalaka kokoa ny toe-draharaha politika ao amin'ny firenena.
Ny kinasa Sanatsia Prava (izay tsara dika indrindra amin'ny hoe Lalànan'ny Famerenan-Kasina) dia tsirin-kevitra avy amin'i Vladimir Ashurkov, mpikatroka ara-politika sady mpikambana ao amin'ny vaomiera foiben'ny Antokon'ny Firosoana (antoko mpanohitra iray tsy mety voasoratra anarana ao Rosia). Monina ao Londra i Ashurkov amin'izao fotoana izao, ialàna amin'ny fanenjehana ara-politika.
Tsotra ny hevitra: raha tokony handany lalàna vaovao sy tsaratsara kokoa, dia aleo ny efa misy ankehitriny ankehitriny no andaniana fotoana hodinihina avy amin'ny zoron'ny zon'olombelona sy ny fahafahan'ny tsirairay ary manoro izay lalàna tokony hofoanana. Na dia sarotra dia sarotra aza ny hanatanterahana izany raha mbola eo amin'ny fahefana i Vladimir Putin, dia manantena ny vaomiera fa ilaina ny fanondroan'izy ireo rehefa miova lalana ara-politika i Rosia.
Manana anjara asa hamakafaka ny lalàna hamantarana sy hamelabelarana ireo zavatra tokony atao amin'ny fanafoanana ireo lalàna voalaza ny fikambanana, rehefa ho avy ny fotoana dia ilaina ireo rehefa tonga ny fotoanan'ny fanalalahana ny rafitra ara-politika ary hamongotra ny rafitra be fahasiahana ny fitondrana vaovao.
Amin'izao fotoana izao ny vaomieram-bahoaka dia ahitana an'i Ashurkov, ny mpanoratra Grigory Chkhartishvili (fantatra amin'ny anarana maha-mpanoratra azy ho Boris Akunin), Pavel Chikov filohan'ny fikambanana mpandala ny zon'olomelona Agora, Irina Yasina mpisolovavan'ny zon'olombelona, Elena Panfilova filohan'ny Foibem-pikarohana iadiana amin'ny Kolikoly sy ny Fisantaran'andraikitra Fangaraharana Iraisampirenena, Boris Zimin mpandraharaha, ary i Vladimiar Pastukhov mpahay lalàna. Ny Ekonomista Sergey Guriev, izay anisan'ny tao amin'ny fisantaran'andraikitra teo aloha, dia vao nandao ny vondrona noho ny nanendrena azy ho Lehiben'ny Ekonomista ao amin'ny BERD. Mahazo fanotronana avy amin'ny vondrona manampahaizana amin'ny sehatry ny lalàna, fiarahamonina ary toekarena ihany koa ny Sanatsia Prava.
Ny vaomieram-bahoaka ao amin'ny Sanatsia Prava. Sary avy amin'ny sanatsia.com.
“Ny tanjonay dia ny handrafitra rejisitry ny lalàna tokony hofoanana satria mifanohitra amin'ny Lalampanorenana (rosiana) sy ny zo fototra mahaolona ireo,” hoy i Ashurkov. “Ny vaomieranay noho izany dia ahitana ireo olona manana fizokiana ao amin'ny fiarahamonina, fa tsy mifandray mivantana amin'ny politika na firehankevitra manokana”.
Efa namoaka ny lisitry ny lalàna folo voalohany heverina ho azo tsikeraina, miaraka amin'ny antsipirihan'ny famakafakana ny lalàna tsirairay ny fisantaran'andraikitra. Hita ao :
Ny lalànan'ny “mpitsikilom-bahiny” mitaky amin'ny ONG mahazo famatsiam-bola avy any ivelany hanonon-tena ho izany
Ny lalàna Dima Yakovlev izay mandrara ny olom-pirenena US tsy hanjanaka kilonga rosiana
Ny lalànanan'ny “fikambanana manelingelina” nokendrena hanalefahana ny fisantaran'andraikitra heverin'i Kremlin ho mandrahona ny lamina ara-politika misy ankehitriny
Ny lalàna mametraka ho heloka bevava ny fanaovana tsinontsinona ireo finoana sy fahatsapana ara-pivavahana
Ny filàna fankatoavan'ny rosiana indray ny sakafo voafono
Ny lalànan'ny fanakanana tranonkalam-pifandraisana tsy misy didim-pitsarana
Ny lalànan'ny “propagandy pelaka”
Ny lalàna mamehy ny fihaonana, fijoroana tsy mihetsika ary fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana
Ny lalàna mametraka ho heloka bevava ny fanendrikendrehana
Ny lalam-pifidianana ankehitriny
Hitan'i Ahurkov ho azo heverina ho kianja iraisana ho an'ireo mpandray anjara ara-politika liberaly ao Rosia ny fisantaran'andraikitra, mpandray anjara voampanga ho mifandramatra anaty sy tsy manana programa politika mazava. Inoan’ i Ashurkov fa mety ho iray amin'ny kitro ifaharan'ny fanadiovana ny firenena amin'ny lovam-pitondrana feno fahasiahana mankany amin'ny fampandrosoana matanjaka ny fandravana ny lalàna mangeja ho tanjona mahaolompirenena fa tsy tanjona ara-pirehankevitra.
Tahaka izao no endrika tsara indrindra hitako: fifidianana malalaka sy ara-drariny ao amin'ny Duma-mpanjakana, ary ireo antoko mandrafitra azy dia hanana andian-dalàna azo foanana amin'ny fandatsaham-bato voalohany.
Te-hampandray anjara ny olompirenena rosiana ihany koa ny ekipan'ny he Sanatsia Prava, ka dia manana zoro famaliam-panontaniana maromaro ny tranonkalam-pifandraisan'izy ireo ka ao no ahafahan'ny mpiserasera rehetra manolo-kevitra amin'ny lalàna mila dinihana amin'ny manaraka, sy ahafahany manao fanazavana fohifohy amin'ny tolo-kevitr'izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena tsotra, ny tatitra ataon'ny vahoaka ary ny fanangonana fanapahan-kevitra iraisana ny anantenan'ny tetikasa hahazoana fitokisana avy amin'ny ampahany maromaro amin'ny vahoaka rosiana sy hananganana maodelim-pisantaran'andraikitra mahaolompirenena manandanja izay azo hamaroina any amin'ny seha-piainana rosiana ara-politika ara-piarahamonina ary ara-toekarena.